प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको खुलासा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको खुलासा
काठमाडौँ, १६ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको उनकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट भारतले राजिनामा मागेको नभई आफुले मागेको बताएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भारतको इसारामा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको टिम परिचालित भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै त प्रचण्डलाई भारतले नै हुर्काएको व्यक्तिको रुपमा आलोचित हुँदै आएका छन् । भारतको इसारामा नै प्रचण्डले पार्टी तथा सरकारलाई असफल बनाउन एक पछि अर्को कदम यो वा त्यो बहाना बनाउँदै आएका छन् । उनकै योजनामा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समेत छोपिने गरी कुप्रचार हुने गरेको आम नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेका छन् ।
हिजो पूर्वएमाले वा केपी ओलीको आर्शिवाद नपाएको भए चुनावमा समेत हार्ने निश्चित भएको थियो, प्रचण्डमा । यो तितो सत्य हो । स्थानीय तहमा कांग्रेसको बुई जढ्दा तत्कालिन माओवादी रातको समयमा टर्च लाईट लगाएर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका प्रचण्डले अब पनि नेतृत्वमा रहे भने नेकपालाई सोही अवस्थामा पुर्याउने लगभग निश्चित जस्तै देखियो ।
भारतको टिका लगाएर नेतृत्व गर्छु भनि सपना देख्ने प्रचण्डले अब नेकपाको नेतृत्व संहालिरहे नेकपाको अस्थितत्वमा समेत ठूलो संकट पर्ने देखिएकाले वेलैमा नेकपाको नेतृत्व तथा नेकपा निकट जनताले सोच विचार गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
त्यती मात्र हैन अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गुट र उपगुटमको लहै लहैमा लाग्ने अन्य केही नेतृत्वले गर्दा पनि नेकपाका कार्यकर्ताको भविष्य अन्धकार हुने बाटोमा अघि बढेको देखिएको छ । भैंसेपाटी तथा रागाँ पाटी चलाएर कुर्सीको लागि लडाई गर्ने प्रचण्डले नेपाललाई पुनः भारतको शरणमा पुर्याउने लक्षमा अघि बढेका छन् ।
प्रम ओलीको चट्टानी अडानका कारण मुलुकले विकास र समृद्धिको आधार तयार गरेको स्पष्ट छ । त्यती मात्र हैन, गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रकृयामा अघि बढेको छ । ओलीकै नेतृत्वमा संविधानमा समेत गुमेको भुमि लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेत जारी भएको छ । के यो हिम्मत हिजो प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका थिए ? यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आफु देशको लागि केही गर्न पनि नसक्ने, अरुले गरेको पनि देखि नसक्ने यी नेतालाई नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी रहेको छ ।
हुनत, नेपाली जनताले बुझेका छन्, प्रचण्ड र दिल्ली भनेको पर्यायवाची शब्द हो । तर अब नेपाली जनता त्यती अबुझ छैनन् । एक एकको हिसाव किताव राख्नेछन् र माग्नेछन् । त्यो दिन प्रचण्डले पृथ्वीको कुनै ठाउँमा त हैन पानी मुनि लुकेपनि जनताले छाड्ने छैनन् । यती हेक्का रहोस्, प्रचण्डमा ! आफ्नो दम्भ मा चुनाव जितेर आउ पार्टी अदक्ष र प्रधानमन्त्री त के कार्यकारी राष्ट्रपति खाऊ हिम्मत छ ???
अष्ट्रेलियामा ८५ वर्षीया एक वृद्धालाई ठ’गी गरेको आरोपमा दुई नेपाली प’क्राउ !